छविलाई डिर्भोस दिएकी रेखाले गरिन आमा बन्ने रहर तर बाबु को ?::Pathivara News
छविलाई डिर्भोस दिएकी रेखाले गरिन आमा बन्ने रहर तर बाबु को ?
काठमाडौं- चर्चित नायिका रेखा थापाले आफुलाई आमा बन्न रहर लागेको बताएकी छिन् । भर्खरै मात्र राजनितीमा प्रबेश गरेर चर्चामा आएकी रेखाले राप्रपा नेपालको एक कार्यक्रममा बोल्दै आमा बन्न रहर लागेको बताएकी हुन् ।
यति मात्र होइन उनले विवाह गर्ने समय पनि आएको हुनाले मिलेमा केही वर्षमा विहे समेत गर्ने बताएकी छिन् ।
अब राजनैतिक नायीका बन्ने उदघोष गर्दै रेखाले नायिका बनेर मात्र महिलाको मुद्दा उठाउन असहज भएको हुँदा राजनीतिमा आएको बताएकी छिन् । राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेपछि नायिका रेखा चलचित्र भन्दा पनि राजनितीमै सक्रिय हुन थालेकी छिन्।